Message from the MISA Administration – Mandalay International Science Academy
Message from the MISA Administration
May 31, 2022 Wai Yan
[မွနျမာဘာသာပွနျ အောကျတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါသညျ။]
[မြန်မာဘာသာပြန် အောက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။]
As the new academic year is commencing soon, you and your children must be very excited, as we will be back to school for onsite learning after two years of the COVID-19 Global Pandemic.
There areacouple of things we would like to bring to your attention.
School Commencement Date and Induction Programme
Due to certain circumstances that are beyond our control, the school’s commencement date has been extended until June 13. Classes will be on-site, face-to-face.
The First Days of the School
All classes will commence on the 13th of June. In order to ensure that there isasmooth opening without much traffic on the first day, the school will commence as follows.
Students from Primary Classes (From Year2to Year 6) are expected to arrive at the school before 8:45 AM.
Students from Secondary and High School (Year7and above) are expected to arrive at school at 10:00 AM.
We request that parents come from 26th street, and not to make U-turns near the school.
Study Hours for primary classes will commence from the 3rd week of the school year. Until then, primary classes are dismissed at 2:20 PM.
Secondary classes are dismissed at 3:10 PM.
Text books for Year2to Year9can be picked from the school starting from next Monday; June 6. IGCSE classes will be receiving their books after they have confirmed their subject choice only; which usually happens two weeks after the commencement. For those who have already decided their subject choices, they can get their book on the first day of school.
The School Administration Team
Mr. Merdan Nazarov has been appointed as the Head of School for the Secondary Campus; and he can be reached at principal@misa.edu.mm.
Mr. Yoldash will be serving as the Head of School for the Primary and Kindergarten Campuses. He has been living and working foraschool in Vietnam asaprincipal. His email address is principal.primary@misa.edu.mm .
Mr. Yerzhan will be the welfare coordinator for MISA schools. He will be responsible for the Character and Value Education and school activities.
Dr. Nelly will continue to serve as the vice principal for the primary school. She can be reached at vpprimarymisa@misa.edu.mm.
Mr. Myo Min has been appointed as the vice principal for the high school – for IGCSE and A Levels. He can be reached at myomin@bfi-edu.com.
Mr. Dilshod will be serving as the vice principal for lower secondary classes. He can be reached at vpsecondary@misa.edu.mm.
Mr.Kyaw Moe Aung has been appointed as the Director of Studies for BFI schools in Mandalay and Nay Pyi Taw. He will be responsible for the teaching and learning process, recruitment and professional development of teachers. He can be reached at kyawmoeaung@bfi-edu.com.
မကွာမီ စာသငျနှဈသဈ စတငျတော့မညျဖွဈပါသညျ။
COVID-19 ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ ကူးစကျရောဂါဖွဈပှားပွီး နှဈနှဈအကွာတှငျ ကြောငျးသို့ ပွနျလညျ တကျရောကျကျနိုငျကွမညျဖွဈသညျ့အတှကျ လူကွီးမငျးတို့နှငျ့ ကြောငျးသားမြား အနဖွေငျ့ အလှနျစိတျလှုပျရှားနရေမညျ ဟု ယုံကွညျပါသညျ။
ကြှနျုပျတို့ လူကွီးမငျးတို့အား အသိပေးအကွောငျးကွားစရာ အခကျြအခြို့ ရှိရှိပါသညျ။
ကြောငျးစဖှငျ့သညျ့နနှေ့ငျ့ စတငျသငျကွားမညျ့ အစီအစဉျ
ကွိုတငျတှကျဆထား၍မရသော အခွအေနအေခြို့ကွောငျ့ ကြောငျး၏စတငျမညျ့ရကျကို ဇှနျလ ၁၃ ရကျနသေို့ ပွောငျးရှထေ့ားပါသညျ။ အှနျလိုငျးမှ မဟုတျဘဲ ပုံမှနျအတိုငျး ကြောငျးတှငျး သငျကွားရနျ စီစဉျထားပါသညျ။
အတနျးအားလုံးကို ဇှနျလ 13 ရကျနတှေ့ငျ စတငျပါမညျ။ ပထမနတှေ့ငျ ယာဉျကွောပိတျဆို့မှု မရှိလှစဘေဲ ခြောမှစှေ့ာဖှငျ့လှဈနိုငျစရေနျအတှကျ ကြောငျးပထမဆုံး ဖှငျ့မညျ့ရကျတှငျ အောကျပါအတိုငျး စီစဉျထားပါသညျ။
မူလတနျး အတနျးမြား (Year2မှ Year6) ကြောငျးသားမြားသညျ နံနကျ ၈ နာရီ ၄၅ မတိုငျမီ ကြောငျးသို့ ရောကျရှိရပါမညျ။
အလယျတနျးနှငျ့ အထကျတနျးကြောငျး (Year7နှငျ့အထကျ) မှ ကြောငျးသားမြားသညျ နံနကျ ၁၀ နာရီတှငျ ကြောငျးသို့ ရောကျရှိလာမညျဖွဈသညျ။
မိဘမြား အနနှေငျ့ ၂၆ လမျးမှ မွောကျမှ တောငျသို့ လာကွပါရနျ နှငျ့နှငျ့ ကြောငျးအနီး ဂငယျကှေ့ မကှပေ့ါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။
မူလတနျး အတနျးမြားအတှကျ Study Hours အခြိနျပိုအခြိနျပို စာသငျခြိနျမြားကို စာသငျနှဈ၏ တတိယပတျတှငျ စတငျမညျဖွဈသညျ။ ထိုနေ့ မတိုငျမီတှငျမီတှငျ နလေ့ညျ ၂း၂၀ တှငျ မူလတနျးမြား ဆငျးပါမညျ။
အလယျတနျးမြား ညနေ ၃း၁၀ နာရီ တှငျ ဆငျးပါမညျ။
Year2မှ Year9အတှကျ စာအုပျမြားကို လာမညျ့ တနင်ျလာနမှေ့ စတငျ၍ ကြောငျးတှငျ ယူနိုငျပါသညျ။ IGCSE အတနျးမြားသညျ ၎င်းငျးတို့၏ ဘာသာရပျရှေးခယျြမှုကို အတညျပွုပွီးနောကျတှငျကျတှငျ ၎င်းငျးတို့၏ စာအုပျမြားကို လကျခံရရှိမညျဖွဈပါသညျ။ ဘာသာရပျ​​ရှေးခယျြ​မှု​ ဆုံးဖွတျ​ပွီးသားဖွဈ​သူ​တှအေတှကျ​ ​ကြောငျးစတကျ​​သညျ့အခါ စာအုပျ​ရနိုငျ​ပါမညျ။
Mr. Merdan Nazarov အား Secondary Campus အတှကျ ကြောငျးအုပျဆရာကွီးအဖွဈ ခနျ့အပျထားပွီး ကြောငျးအုပျဆရာကွီးထံ principal@misa.edu.mm မှတဆငျ့ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။
Mr. Yoldash သညျ မူလတနျးနှငျ့ မူကွို ကြောငျးခှဲမြားအတှကျ ကြောငျးအုပျဆရာကွီးအဖွဈ တာဝနျ ထမျးဆောငျမညျဖွဈသညျ။ သူသညျ ဗီယကျနမျတှငျ ကြောငျးအုပျကွီးအဖွဈ နထေိုငျ အလုပျလုပျကိုငျခဲ့ပါသညျ။ သူ၏အီးမေးလျလိပျစာမှာ principal.primary@misa.edu.mm ဖွဈသညျ။
Mr. Yerzhan သညျ MISA ကြောငျးမြားအတှကျ the welfare coordinator ဖွဈလာမညျဖွဈသညျ။ Character and Value Education နှငျ့ ကြောငျးလှုပျရှားမှုမြားအတှကျ သူတာဝနျယူမညျဖွဈသညျ။
ဒေါကျတာ Nelly သညျ မူလတနျးကြောငျး၏ ဒုတိယကြောငျးအုပျအဖွဈ ဆကျလကျထမျးဆောငျမညျဖွဈသညျ။ ဆရာမမကို vpprimarymisa@misa.edu.mm မှတဆငျ့ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။
ဆရာမြိုးမငျးအား IGCSE နှငျ့ A Levels အတှကျ အထကျတနျးကြောငျး၏ ဒုတိယကြောငျးအုပျအဖွဈ ခနျ့အပျခံရသညျ။ ဆရာ့ ထံသို့ထံသို့ myomin@bfi-edu.com မှတဆငျ့ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။
Mr. Dilshod သညျ အလယျတနျးအောကျဆငျ့ အတနျးမြားအတှကျ ဒုတိယကြောငျးအုပျအဖွဈ ထမျးဆောငျမညျဖွဈသညျ။ vpsecondary@misa.edu.mm သို့ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။
မန်တလေးနှငျ့ နပွေညျတျောရှိ BFI ကြောငျးမြားအတှကျ Director of Studies အဖွဈ ဦးကြျောမိုးအောငျအား ခနျ့အပျထားပါသညျ။ သငျကွားသငျယူရေး၊ ဆရာမြား စုဆောငျးရေးနှငျ့ ဆရာဆရာမမြား အရညျအသှေးတိုးတကျရေးတို့အတှကျ တာဝနျယူဆောငျရှကျမညျဖွဈသညျ။ kyawmoeaung@bfi-edu.com မှတဆငျ့ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။
ကြေးဇူး အထူး တငျရှိပါသညျ။
မကြာမီ စာသင်နှစ်သစ် စတင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
COVID-19 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီး နှစ်နှစ်အကြာတွင် ကျောင်းသို့ ပြန်လည် တက်ရောက်က်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည့်အတွက် လူကြီးမင်းတို့နှင့် ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေရမည် ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ လူကြီးမင်းတို့အား အသိပေးအကြောင်းကြားစရာ အချက်အချို့ ရှိရှိပါသည်။
ကျောင်းစဖွင့်သည့်နေ့နှင့် စတင်သင်ကြားမည့် အစီအစဉ်
ကြိုတင်တွက်ဆထား၍မရသော အခြေအနေအချို့ကြောင့် ကျောင်း၏စတင်မည့်ရက်ကို ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့သို့ ပြောင်းရွှေ့ထားပါသည်။ အွန်လိုင်းမှ မဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်အတိုင်း ကျောင်းတွင်း သင်ကြားရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
အတန်းအားလုံးကို ဇွန်လ 13 ရက်နေ့တွင် စတင်ပါမည်။ ပထမနေ့တွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု မရှိလှစေဘဲ ချောမွေ့စွာဖွင့်လှစ်နိုင်စေရန်အတွက် ကျောင်းပထမဆုံး ဖွင့်မည့်ရက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း စီစဉ်ထားပါသည်။
မူလတန်း အတန်းများ (Year2မှ Year6) ကျောင်းသားများသည် နံနက် ၈ နာရီ ၄၅ မတိုင်မီ ကျောင်းသို့ ရောက်ရှိရပါမည်။
အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်း (Year7နှင့်အထက်) မှ ကျောင်းသားများသည် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကျောင်းသို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
မိဘများ အနေနှင့် ၂၆ လမ်းမှ မြောက်မှ တောင်သို့ လာကြပါရန် နှင့်နှင့် ကျောင်းအနီး ဂငယ်ကွေ့ မကွေ့ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
မူလတန်း အတန်းများအတွက် Study Hours အချိန်ပိုအချိန်ပို စာသင်ချိန်များကို စာသင်နှစ်၏ တတိယပတ်တွင် စတင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ မတိုင်မီတွင်မီတွင် နေ့လည် ၂း၂၀ တွင် မူလတန်းများ ဆင်းပါမည်။
အလယ်တန်းများ ညနေ ၃း၁၀ နာရီ တွင် ဆင်းပါမည်။
Year2မှ Year9အတွက် စာအုပ်များကို လာမည့် တနင်္လာနေ့မှ စတင်၍ ကျောင်းတွင် ယူနိုင်ပါသည်။ IGCSE အတန်းများသည် ၎င်းတို့၏ ဘာသာရပ်ရွေးချယ်မှုကို အတည်ပြုပြီးနောက်တွင်က်တွင် ၎င်းတို့၏ စာအုပ်များကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာရပ်​​ရွေးချယ်​မှု​ ဆုံးဖြတ်​ပြီးသားဖြစ်​သူ​တွေအတွက်​ ​ကျောင်းစတက်​​သည့်အခါ စာအုပ်​ရနိုင်​ပါမည်။
Mr. Merdan Nazarov အား Secondary Campus အတွက် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ထားပြီး ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးထံ principal@misa.edu.mm မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Mr. Yoldash သည် မူလတန်းနှင့် မူကြို ကျောင်းခွဲများအတွက် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဗီယက်နမ်တွင် ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာမှာ principal.primary@misa.edu.mm ဖြစ်သည်။
Mr. Yerzhan သည် MISA ကျောင်းများအတွက် the welfare coordinator ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ Character and Value Education နှင့် ကျောင်းလှုပ်ရှားမှုများအတွက် သူတာဝန်ယူမည်ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ Nelly သည် မူလတန်းကျောင်း၏ ဒုတိယကျောင်းအုပ်အဖြစ် ဆက်လက်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆရာမမကို vpprimarymisa@misa.edu.mm မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဆရာမျိုးမင်းအား IGCSE နှင့် A Levels အတွက် အထက်တန်းကျောင်း၏ ဒုတိယကျောင်းအုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသည်။ ဆရာ့ ထံသို့ထံသို့ myomin@bfi-edu.com မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Mr. Dilshod သည် အလယ်တန်းအောက်ဆင့် အတန်းများအတွက် ဒုတိယကျောင်းအုပ်အဖြစ် ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ vpsecondary@misa.edu.mm သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်ရှိ BFI ကျောင်းများအတွက် Director of Studies အဖြစ် ဦးကျော်မိုးအောင်အား ခန့်အပ်ထားပါသည်။ သင်ကြားသင်ယူရေး၊ ဆရာများ စုဆောင်းရေးနှင့် ဆရာဆရာမများ အရည်အသွေးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ kyawmoeaung@bfi-edu.com မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိပါသည်။
ICT Yrs 2,3and 4